SONGZ Overview | Songz Mota Inodzora Mhepo Co., Ltd.
Magetsi Bhazi Mhepo Inodzora
Magetsi Mhepo Inodzora yeMagetsi Minibus uye Kochi
Magetsi Mhepo Inodzora yeMagetsi Bhazi uye Kochi, Imwe Yega Kudzoka Kwemhepo
Magetsi Mhepo Inodzora yeMagetsi Bhazi uye Kochi, Double Mhepo Kudzoka
Magetsi Bhazi Mhepo Inodzora yeMagetsi Double Decker Bhazi
Bhatiri Thermal Management Sisitimu yeMagetsi Bhazi, uye Kochi
Kuchenesa Mhepo uye Disinfection System
Bhazi Mhepo Inodzora
Air Conditioner yeMini uye Midi Guta Bhazi kana Yevashanyi Bhazi
Air Conditioner yeBhazi, Murairidzi, Bhazi rechikoro uye Bhazi rakataurwa
Economy Mhepo Inodzora yeBhazi, Murairidzi, Bhazi reChikoro uye Bhizinesi rakataurwa
Bhazi Mhepo Inodzora yeDhivha Decker Bhazi
Roof Yakakwira Yakananga Dhiraivha Rori Refrigeration Unit
Pamberi Yakakwira Yakananga Dhiraivha Rori Refriji Yuniti
Mberi Yakakwira Yakabatanidzwa Rori Refriji Yuniti
Yega-inofambiswa Rori Refriji Yuniti
Magetsi & Nyowani Simba Rori Refriji Yuniti
Rail Transit Mhepo Inodzora
Sravana Sameeralu Serial 4th SONG Technology
Sravana Sameeralu Serial 4th SONGZ News
SONGZ AUTOMOBILE AIR KUSVIRA CO., LTDapa inonzi SONGZ, yakavambwa mu1998. Iyo inobatana-stock kambani inoshanda mukutsvagisa, kusimudzira, kugadzira uye kutengesa kwemotokari mweya-kutonhodza masisitimu. Yakanga yakabudirira kunyorwa paShenzhen Stock Exchange muna 2010. Stock chidimbu: SONGZ, stock code: 002454. Izvi zvinoita kuti SONGZ ive yekutanga yakanyorwa kambani muChina yekufambisa mota yemhepo indasitiri. SONGZ inozvipira kune mota mota yekugadzirisa masisitimu seyemhando yepamberi uye ichave mutengesi wepasi rose neepuratifomu yehunyanzvi uye yekugadzirisa mumba munguva pfupi iri kutevera.
SONGZ bhizinesi rinofukidza magetsi uye akajairwa makuru uye epakati-saizi saizi bhazi air conditioner, mutyairi mota air conditioner, njanji transit air conditioner, rori Refriji zvikamu, yemagetsi compressor, uye mota air conditioner kupembedza zvikamu
SONGZ Mabhizimisi Makumi Matanhatu
SONGZ Kugadzira Base
Ine 13 yekugadzira base, SONGZ yakaumba dhizaini yakanangana neShanghai, China uye zvichibva kuFinland, Indonesia neChina muAnhui, Chongqing, Wuhan, Liuzhou, Chengdu, Beijing, Xiamen, Suzhou nemamwe maguta. Huwandu hwevashandi hwave kupfuura zviuru zvitatu.
SONGZ HQ, Shanghai China
SONGZ Global Market Kuvapo
SONGZ bhazi remhepo zvigadzirwa zvigadzirwa zvakapihwa kune vangangoita vese mabhazi vagadziri muChina, saYutong, BYD, Golden Dragon, Zhongtong, nezvimwe. Zvigadzirwa zvinotumirwa kune dzinopfuura nyika makumi mana, kusanganisira nyika dzeEuropean seRussia, England, Italy, uye nyika dzeNordic, nyika dzeAmerica senge Mexico, Brazil, Chile, Colombia, neEcuador, nyika dzeAsia senge Japan, South Korea, India, Malaysia, Indonesia, Thailand neVietnam, uye zvakare kuendesa kuAustralia neNew Zealand.
Panguva imwecheteyo, takaunganidza huwandu hukuru hwevatengi zviwanikwa mubhizimusi munda wevapfuuri mota mhepo kutonhodza, njanji yekufambisa mota mhepo kutonhodza uye rori firiji zvikamu.
SONGZ Vatengi Makuru eMabhazi Mugadziri
Chigadzirwa chave chakazivikanwa zvikuru nevatengi kumba nekune dzimwe nyika vane zviyero zvemhando yepamusoro senge kuchengetedza simba, kuchengetedza kwezvakatipoteredza, chengetedzo, ruzha rwakaderera, nyaradzo, uye huremu hwakareruka.
SONGZ yakagara yakanamatira kune "inoshanda, inochengetedza simba uye inochengetedza zvakatipoteredza" chigadzirwa zano uye "yepamusoro-soro, yepamusoro-soro, yepamusoro-sevhisi" yehunyanzvi yekushambadzira musika pfungwa, yakatsunga kuve wepasi rose kosi yemota yekupisa maneja nyanzvi.
SONGZ Kugadzira Kugona
SONGZ inosuma epasirose-inotungamira zvishandiso zvine hungwaru uye ruzivo ruzivo kuitira kuona kugadzirwa kwekuita, kugadzikana uye kurongeka.
Yepamberi michina senge izere-otomatiki yekugadzira mutsara / gungano mutsara, otomatiki ammonia yekutsvaga mutsara, otomatiki yekugadzirisa tambo yemasimba uye static vortex mahwendefa, yakakwira-inomhanya fini Mashini, otomatiki argon arc yekutengesa muchina, brazing furna uye laser welding muchina inovandudza zvakanyanya kugadzirwa kunyatsoshanda.
SONGZ inosanganisa zviwanikwa neruzivo pamwe neInformatization uye maindasitiri uye inovaka fekitori yakangwara yedhijitari ichishandisa masystem eruzivo senge ERP, MES uye WMS.
Otomatiki Amoniya Kutsvaga Line
Yekumhanya-mhanyisa Fin Machine
Otomatiki Argon Arc Welding Machine
Munguva yeindasitiri 4.0, SONGZ inoshingairira kuvaka matekinoroji epamberi epamberi, inosimbisa kugadzirwa kwehungwaru, inogadzira chinangwa chemabhizimusi akangwara, inovandudza gadziriso manejimendi emabhizinesi, inoita manejimendi manejimendi kuve neruzivo-rwakawanda, otomatiki, edhijitari nesainzi, inovandudza kugadzirwa mashandiro, uye inosimudzira mabhizinesi Kugadzira kusimudzira.
SONGZ Hupenyu Simbiso
Unhu Hwemitemo: Ita zviyero zvehurongwa uye tarisa pane kugutsikana kwevatengi.
Kunda kugutsikana kwevatengi kuburikidza nekuenderera kuyerwa uye kuongorora.
Environmental Policy: Kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, kuchengetedza kwesimba uye kudzikisira kudyiwa, kushandiswazve, kubatanidzwa kwese, kugara nemutemo uye nekuenderera mberi kwekuvandudza.
Occupational Hutano neKuchengetedza Gwara: Hutano hwekutanga, kuchengetedzeka kutanga, kudzivirira kwesainzi, kubatanidzwa kwese, kugara nemutemo uye nekuvandudza kunopfuurira.
SONGZ inosimbisa TS16949 uye inotarisa kugutsikana kwevatengi, kubatanidzwa kwese uye nemhando yepamusoro. Munguva yekuuya kwekudzora kwemhando yepamusoro, SONGZ inoenderera ichivandudza chirongwa chemuenzaniso chekuvimbika uye nekuenderera mberi nekuvandudza maturusi ekuedzwa kweyakavimbika mhedzisiro. SONGZ ikozvino ine makumi mashanu nemakumi mashanu nematanhatu ekuongorora maturusi anoongorora maturusi ekuyedza zvinoenderana neMSA kuti agutse zvinodiwa. Kunze kwezvo, SONGZ inosimbisa homogeneity yezvigadzirwa kuburikidza nekudzokorora, optimization uye kudzidziswa kwevanopa uye inotakura yedu yechitatu-bato bvunzo yezvakakosha zvikamu gore rega kuti ive nemhepo inodzora masisitimu ane akachengeteka uye akavimbika mashandiro. Munguva yekugadzirisa maitiro, SONGZ inotsigira kubatanidzwa kwese, kuongororana, kuongorora kwekutanga uye kwekupedzisira uye kuongorora kwese kuita Kune akakosha maitiro, ekumusoro-kuita bvunzo maturusi anotorwa kuti ave nechokwadi chekuvimbika kwechigadzirwa uye izere otomatiki ammonia yekuona michina inogamuchirwa zvakanyanya kune mweya kuomarara kwemhepo kutonhodza system. Vatatu-mu-mumwe otomatiki chengetedzo bvunzo michina inogamuchirwa kuitira kuti igutse zvinodikanwa pane chengetedzo yechigadzirwa. Kuongorora kwakazara kunoitwa kuti uve nechokwadi chekuchengetedza chigadzirwa uye kuvimbika. Maitiro akakosha anoongororwa uchishandisa SPC kuitira kuti uve nechokwadi chekudzikama uye nekupa data rekuongorora kuvandudza kunaka.
SONGZ masters kushandiswa kwechigadzirwa zvinoenderana nemhinduro yemusika, zvizere uye zvechokwadi zvinoratidza mamiriro ese kuburikidza nekugutsikana ongororo, inoita PDCA uye inoramba ichivandudza mhando yechigadzirwa.
GB / T 19001-2008 / ISO 9001: 2008
IRIS CERTIFICATION ISO / TS 22163: 2017
Mamiriro Ekumhepo Ekuita Bvunzo Bhenji
Vibration Kwayedza Bench
SONGZ Anokudza Wall
Kubva pakagadzwa muna1998, SONGZ yakahwina kugutsikana nekurumbidzwa kubva kune vatengi vedu kubva kuChina nekune dzimwe nyika seye yakanakisa mutengesi uye mhinduro mupi wemotokari mamiriro ekugadzirisa.
Izvi zvinonyanya kukosha kuratidza kuti SONGZ yakazvimiririra yakagadzira "Kugadzira Tekinoroji uye Kushanda kweMicro Channel Tubes uye Heat Exchangers", uye chirongwa chakakunda "Chinese National Science uye Technology Progress Yechipiri Mubayiro", iri kurumbidzwa kukuru kubva kuChinese State Council mune mota indasitiri yekugadzirisa mhepo.
Uye SONGZ yakahwina kuzivikanwa kubva kumotokari indasitiri inodziya mweya uye kubva kuruzhinji rwezvipo zvakaitwa neZIMZ mukusimudzira tekinoroji muindasitiri yemhepo inotonhorera uye nemagariro mutoro uyo SONGZ inotora.
Akanakisa Anotengesa CRRC, China
Akanakisa Anopa nokutengesa Foton, China
Akanakisa Anopa Hino, Philippines
Akanakisa Anotengesa yeSANY, China
Beijing Olimpiki Sevhisi Service
China National Science & Technology Progress Mubairo
CNAS Lab Chibvumirano Chitupa
Mutengesi Laboratory Certification Chitupa cheBDD
Bhizimusi Musimboti:Edza kuti uvandudze nharaunda yekugara kwevanhu.
Enterprise Vision:Iva nyika's yekutanga-kirasi nharembozha mhepo-inogadzirisa mupi.
Management Mutemo:Kugutsikana kwevatengi, kugutsikana kwevashandi, kugutsikana kwe stockholder.
SONGZ Enterprise Tsika
Tsika mweya we Enterprise uye tsika tsika isimba risingaonekwe rekushandisa uye manejimendi. SONGZ yakanamatira kune yetsika pfungwa ye "vanhu-yakatarisana" kwemakore.
SONGZ inopa vese vashandi danho rakakura, inomutsa zvizere kufarira kwavo, inogadzira uye inopa mikana yakanaka kwavari uye vanotarisira kukura pamwe chete navo.
SONGZ Yepasi Pose Chikwata Tsika:
Kuvhura & Kusiyana.
Kutendeseka & Kuzvitsaurira.
Simplicity & Kutaura.
SONGZ Team Njere
Shandira pamwe neAsi Absolute Kutendeseka uye Wakatarisisa paKureba-Kureba Kukura.
Kubudirira kwebhizinesi kunoonekwa nekubatana. SONGZ ine hunyanzvi uye hwakavimbika manejimendi timu iyo inokura pamwe nekambani uye inotungamira kune vashandi kuti vazadzise zvinangwa zvavo nekuda kwesimba rakabatana rekubatana, simba rakasimba rekuita uye mweya usingakanganisike wakatsunga.
Enda kumberi nemoyo unotenda, uye goho kubwinya nekushanda nesimba.
SONGZ, Inogadzira nguva nyowani yemhepo inofefetera mhepo!
Kwete. 4999 Huaning Road, Shanghai, PR China, 201108